बस चढ्ने तरखरमा छु म ।
– ‘कहाँ जाने दाइ ?’
ल आउनू, सिट खाली छ ।
झोला समाउन आउँछ ।
म रिसाएझैँ हेर्छु ।
– ‘सस्तोमा मिलाइदिन्छु, राम्रो सिट छ ।’
ऊ श्यामेजत्रै छ । छोटो कट्टु र टि–सर्ट लगाएको छ ।
‘साले ! मेरो एरियामा किन आ’को । आफ्नोतिर जा ! अहिले भेट्लास् अस्तिको जस्तो ।’
ऊभन्दा अलि मोटोघाटो उसको जस्तै उमेरको आउँछ ।
उसको हातबाट मेरो झोला लिन्छ ।
बसपार्क चार दिशाबाट पस्न मिल्ने खालको छ ।
म उत्तरतिरबाट पसेकी थिएँ ।
आउँदा रिक्सामा आएको थिएँ बसपार्क । रिक्साचालक पनि यही झोला समाउनेभन्दा पाँच–छ वर्षले जेठो थियो होला ।
पहिलाको केटो दोस्रोको हातमा झोला सुम्पेर जान्छ ।
– ‘आइन्दा मेरो एरियामा टप्कन नआउनू !’
स्वीकृतिमा टाउको हल्लाउँछ पहिलो ।
‘ल भन्नोस् न, कहाँ जाने ?’ हिँड्छ काँधमा झोला हालेर ।
– ‘पख, पख, अरू साथी आउँछन् अनि... ।’
– ‘ए ! अरू पनि हो, कति जना ? ...खोइ कता हो ?’
– ‘हाम्रो टिकट भइसकेको छ ।’
फ्यात्त झोला भुइँमा फाल्छ । निराश भएर जान्छ, रिसाउँदै ।
बस अगाडि गुड्छ ।
केही अघि पुगेर रोकिन्छ ।
– ‘ल ठण्डा–ठण्डा चिसो–चिसो ।’
घाँटीमा डोरोले कोकको क्यारेट झुन्ड्याएको अघिकै जस्तो केटा बस चढ्छ ।
बोतलमा फलामको टुक्राले हानेर आवाज निकाल्दै छ । टिटिटि...
झ्यालबाहिर हेर्छु । अर्को त्यस्तै केटाले चटपटे बेचिरहेछ; ‘ल चटपटे... ।’
टाउकोमा उठाएको छ चटपटेको भार ।
‘ए उता लैजा !’
बसबाट एउटा भलाद्मीको आदेश ।
उसको सानो बच्चाले किनिदिने भनेर दुःख दिइरहेछ ।
‘ल सुनिनस् उता लैजा !’ झ्यालबाट टाउको निकालेर कराउँछ ।
चटपटे बेच्ने कोटा अलि पर जान्छ, सकी नसकी सबै उठाएर ।
बस अगाडि बढ्छ ।
र, फेरि रोकिन्छ ।
नानीहरू थालमा पोलेको मकै र कोही काँक्रोको चिरा बोकेर बसमा उक्लन्छन् ।
बल्ल थाल उठाउने सक्ने उमेरका छन् नानीहरू ।
खलासी कराउँछ– ‘कहाँ चढेका ? तल झर् !’
कोहीलाई कानमा समातेर तल झार्छ ।
म एक चिरा काक्रो उठाउँछु, एउटीको थालबाट ।
ऊ खुसी हुन्छे ।
– ‘कति हो चिराको ?’
उसले मूल्य बताउन नपाउँदै खलासीले तान्छ ।
पैसा दिन नपाई बस अघि बढ्छ ।
म चिरा समातिरहन्छु । यताउता यात्रुलाई हेर्छु । उनीहरू मलाई नै हेरिरहका छन् ।
मूल्य चुकाउन नपाएको काँक्रोको चिरा मेरो हातमा छ ।
म काँक्रो बेच्ने नानीले लगाएको जामा समात्छु, यस्तै चिरा–चिरा परेको जामा ।
कुरा चल्छ– मकैको ।
एउटीले मकै लिन खोजेको थिई, त्यो बेला ।
थालबाट हातमा उठाएकी थिई यात्रुले ।
सँगै बसेकीले भनेकी थिई, ‘खान हुन्न यहाँको मकै ।’
– ‘किन ?’
– ‘अस्ति नै टिभीमा हेर्नुभएन । मरेको मान्छे पोलेको कोइलाले पोल्छन् मकै ।’
मकै बेच्ने सानी नानीले कसम खाँदै थिई– ‘सत्ते होइन । हाम्रो घरमै दाउरा ल्याएर कोइला बनाउनुहुन्छ बा । आमा र म यहाँ मकै बेच्छम ।’
उसको कुरा नपत्याएर हातमा उठाएको मकै घिन मानेझैँ थालमा राखिदिएकी थिई । त्यो बेला मन अमिलो पारेकी थिई मकै बेच्ने नानीले ।
अब बस रोकिन्छ, खाना खाने ठाउँमा ।
भात बाँड्ने ठाउँमा छन् उत्रै नानीहरू ।
त्यहाँ भाँडा माझ्ने ठाउँमा छन् त्यस्तै ।
हाम्रो बसको खलासी पनि छ उत्रै ।
दगुरादगुर गरेका छन्, भात बाँड्ने केटाहरू ।
भाग थपिदिन टेबलमा पुग्न तन्कनुपर्छ केटाहरूलाई ।
‘ए केटा, यता आइज यता !’ भलाद्मीले बाँड्नेलाई बोलाउँछ ।
ऊ दगुर्दैै जान्छ । उसले भनेको थपिदिन्छ ।
‘राम्ररी हाल्न सक्दैनस् ?’ कराउँछ भलाद्मी ।
बस अघि बढ्छ ।
यात्रु टिप्न रोकेको बसमा, केटाहरू चढ्छन् सारङ्गी रेट्दै ।
यात्रुहरू रमाइलो लिन्छन् केटाहरूबाट ।
पैसा दिने बेला हुन्छ । निदाएको बहाना गर्छन् धेरैजसो यात्रुहरू ।
पैसा थाप्दै हिँड्छ बालक केही पाउने आशामा । ‘दाइ !’ कोट्याउँछ एउटालाई ।
साले ! किन उठाको ? किन छोएको ? बल देखाउँछ, निदाएको बहाना गर्ने मान्छे ।
बसको पछिल्तिर एउटा स्टुलमा एउटी नानी छ । अघिदेखि म त्यसतिर हेरिरहेकी छु । दुईवटी मोटीघाटी महिलासँग बस चढेकी हो ऊ पनि म चढेको पछिको दोस्रो स्टपबाट ।
उनीहरूबीचको कुराकानी – ‘मलाई पनि खोजिदिनू न !’
– ‘कहाँ, पाउन गाह्रो छ ।’
– ‘यत्रै भए काम चल्छ । योभन्दा ठूली पनि काम छैन । धेरै वर्ष राख्न पाइँदैन ।
महिलाहरू सिटमा छन्, सानी नानी स्टुलमा छे । बसको डण्डी समातेर निदाएकी छ । घरीघरी ती महिलाको काखमा पल्टन्छे । म देखिरहेकी छु एक महिला चिमोट्छे; ‘नसुत्’ भन्नलाई । ऊ बिउँझन्छे, डराउछे तर फेरि भुक्छे । फेरि चिमोटिन्छे ।
यसो झ्यालबाहिर हेर्छु ।
तल खोला हेर्छु बगरमा हेर्छ ।
बगरमा गिटी कुटिरहेका छन् नानीहरू ।
मान्छेको घर बनाउने, बाटो बनाउनको लागि बेचिन्छ यो गिटी ।
ढुङ्गा फोडिरहेका छन् नानीहरू ।
कमलो हातको फलामले हानिरहेछन् ढुङ्गामा ।
म दृश्य घुमाउँछु ।
सम्झन्छु त्यो रिक्सा तान्ने सानो केटालाई ।
सम्झन्छु, बन्दै गरेको घरमा इँटा ओसारेको नानीलाई, अनि माछा बेच्दै गरेको नानी बाबुहरू, सबै छन् आँखामा ।
बस सहर पस्छ ।
देख्छु, बाटो छेउमा पालिस लाउन बसेको सानो केटा ।
भलाद्मी चुरोट तानेर उभिरहेको छ । केटा आफ्नो काखमा राखेर भलाद्मीको जुत्ता पालिस गर्दै छ ।
बसपार्कमा बस पस्छ ।
केटाहरू दगुर्छन् बस रोक्न नपाई, सामान झार्न ।
आपूmभन्दा ठूलो भारी झार्छन् ।
एकछिन खोसाखोस पर्छ केटाहरूबीच । झोला झारेको पैसा माग्छन् मलाही बोल्छ– मैले भनेको थिए र झारिस झोला ? किन दिनु पैसा ?
ट्याक्सी चढेर घर पुग्छु ।
ढोका खोल्न आउँछे मेरी छोरी ।
सुनाउँछे, ‘पल्तिरको श्यामेलाई त अस्पताल लगेको छ नि ! लुइसले टोकेर । लुइसलाई नुहाइदिन लाग्दा पूरै टोकेछ झम्टेर अनि शरीरभरि नङ्ग्राले चिथोरेछ ।’ श्यामल उसको नाम थियो– घरधनीले श्यामे बनाइदिएको नाम फेरेर ।...
म बजारतिर निस्कन्छु, कपाल काट्न ।
भोलि अफिस जानु छ ।
कपाल काटिसकेपछि सोध्छ सेलुनको साहु– ‘मालिस गर्ने हो ?’
– ‘हो हुन्छ ।’ टाउको गहु्रङ्गो भएको छ, केही हल्का हुन्छ ।
म आँखा बन्द गरिरहेछु ।
मसिना हातले मालिस गरिरहेछ ।
आँखा खोल्छु नरम स्पर्शले साह्रै नरम स्पर्श !
पछाडि फर्केर हेर्छु, स्टुलमाथि चढेर मेरो टाउकोमा मासिल गरिरहेको छ सानो केटा ।
म निस्कन्छु ।
घर पुग्दा श्रीमती आइसकेकी हुन्छिन् ।
– ‘खोइ, एक्लै आएको ?’
उनी फतफताउँछिन्, ‘अब के गर्ने होला ? कसरी गर्ने मैले एक्लै यत्रो घरको काम ? जताततै एक्लै भ्याउनुपर्छ । आफ्नो सन्तानमा कसैले जुठो भाँडो माझेका छैनन् । लाज पनि भइसक्यो आफन्ती आउँदा । यो चिसोमा भाँडा माझेर मेरो हात हेर्नू त ! किन नलिई आएको ?’
पहिला बसेकीलाई ठूली भई भनेर बिदा गरेकी मेरी श्रीमतीले आफै । अर्को सानो केटा खोज्न पठाएकी थिइन् मलाई ।
सानो केटा गिटी कुटिरहे जत्रो ! बसबाट झोला झारे जत्रो ! गुड्दै गरेको बसमा सारङ्गी रिटेरहे जत्रो... !
म नबोली भान्साकोठामा पस्छु ।
श्रीमती फतफताइरहन्छिन् ।
म बेसिनभरिको जुठो भाँडो पखाल्नेक्रममा छु ।
exact mirror of our society.
Ramro lago Neelam ji. Simple - Dimple.